Lalatiana Rakotondrazafy : Saika nigadra -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Rakotondrazafy : Saika nigadra
29/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny lahatsoratra navoakan’ny orinasa an-gazety tantanin’i Lalatiana Rakotondrazafy ny faha-20 ny volana mey mikasika ny filazana fa “nanorina trano manana rihana sivy ny filohan’ny antenimieran-doholona”, dia nisy ny fitoriana napetraky ny voatonontonona anatin’ io lahatsoratra an-gazety io. Hahafahana milaza moa fa diso ny vaovao iray havoaka, izany hoe tsy misy porofo, dia manao fanitsiana ilay orinasa an-gazety . Io fanitsiana io dia notontosain’ny gazetin’i Lalatiana Rakotondrazafy ny faha-28 ny volana mey. Ity vaovao navoakan’ny gazety ity rahateo izay vaovao nanala baraka ny filohan’ny antenimieran-doholona, ka raha ny lalàna teo aloha, raha mbola tsy lany ity lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety ity, dia efa nigadra ny tompon’ny orinasa
Midika izany fa ny lalàna izay vao avy nolaniana farany teo no nanavotra an’i lalatiana Rakotondrazafy , ka tsy nampiditra azy am-ponja. Mbola laviny ary tsy ankatoaviny ihany anefa io, nefa dia tokony io no hisaorana noho ny famonjena noentiny. Ankehitriny indray dia lasa mitombo ny henatra amin’ny asa fanaovan-gazety, manoloana ny filazan’ny MLE fa hanatanteraka horonan-tsary mandika ny efa ataon’ny filoha izany hoe ny fotoam-bita izy ireo. Tsy misy ve izany ny asa famoronana ho an’ny asa fanaovan-gazety fa dia fakan-tahaka hatrany no hita?. Fatra mpitsikera ny hala-tahaka ny MLE, izao izy ireo indray no manao izany, sa rehefa ny tena dia tsy diso. Mbola ho lavitra ny fampandrosoana raha izao fihetsika izao no asehon’ny mpanao gazety, hirariana ireo solofo dimbin’ny ala amin’ny fanaovan-gazety mba tsy hanaraka izao fomba ratsy ataon’ny MLE izao.
Efa nazava tanteraka ny toerana izay raisin-dRavalomanana Marc manoloana ny hetsika fanakorontanana sy fanonganam-panjakana, izay kasain’ ireo solombavambahoaka tanterahina etsy amin’ny kianjan’ny fifankatiavana Analakely, “tsy hetsiky ny TIM io, ny antoko tarihiko dia tsy mankasitraka ...Tohiny